Wiil uu Dhalay Madaxweyne Trump oo Kashifay Xag Kaabaysa Baadhista lagu wado Aabbihii ee Xidhiidhkii Ruushka | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Wiil uu Dhalay Madaxweyne Trump oo Kashifay Xag Kaabaysa Baadhista lagu wado Aabbihii ee Xidhiidhkii Ruushka
Washington(Hubaal):- Wiilka uu dhalay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ah Curadka Carruurtiisa, ayaa loo sheegay in xogta ku aaddan Hillary Clinton ee ay u gudbisay Gabadha Qareenka ah, ay qeyb ka ahayd dedaal ay dawladda Ruushka ku caawinaysay ololaha doorashada ee Aabbihii, sida baahiyey Wargeyska New York Times.
Rob Goldstone, oo soo qaban qaabiyay kulankaasi dhacay bishii Juun 2016, ayaa sidaa ku sheegay email, sida uu shaaciyay wargeyska. Hayeeshee, kulankaas ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa kii ugu horreeyay ee dhexmara Muwaaddin Ruush ah iyo Shakhsiyaadka aadka ugu dhaw Madaxweynaha amaba ka tirsanaa Qoyska Trump, waxaanu ka dhacay Dabaqa uu Trump ku leeyahay magaalada New York, iyadoo xilligaasi laba toddobaad ka hor uu Donald Trump ku guulaystay Musharraxnimada Xisbiga Jamhuuriga ee Maraykanka ee laga soo doortay.
Wiilka Madaxweynaha Maraykanku dhalay, oo lagu magacaabo Donald Trump Jr, ayaa qiray in kulankaasi uu dhacay, balse wuxuu ku dooday in Macluumaadka ay Gabadhaasi siisay ahayn mid wax-tar leh ama xog xasaasi ah watay, sida uu hadalka u dhigay Trump Jr.
Wuxuu Curadka Trump dhalay, intaa ku daray in markii dambe ay kala hadashay Haweenaydaasi arrin taas ka duwan oo ah sida Carruurta Ruushka ay ula soo wareegi karaan, una korsan karaan Qoysaska Maraykanka ah ee dalka Maraykanka ku dhan.
Hase-yeeshee, Afhayeen u hadlay Garyaqaannada Madaxweyne Trump, ayaa sheegay in Madaxweynaha Maraykanku Donald Trump aanu ka war-qabin arrintaas, isla markaana aanu ka qeyb-gelin kulankaas.
Guddi ka tirsan Aqalka Congress-ka Maraykanka iyo Dacwad-ooge gaar ah, ayaa baadhitaan ku haya tuhunnadaas, isla markaana si gaar ah u baadhaya in Kooxdii doorashada ololeheeda u qaabbilsanaa Donald Trump markii uu Musharraxa ahaa iyo Ruushka uu xidhiidh ka dhexeeyay ka hor doorashadii 2016-kii dhacday, si ay uga caawiyaan guusha doorashadaas oo la rumaysan yahay in Ruushku Farsamo ahaan ugu hiiliyey oo uu faro-geliyey doorashada.
Baadhitaannada lagu raadinayo xogta xidhiidhkaas, ayaan weli lagu soo bandhigin wax caddeyn ah, Madaxweyne Trump-na wuxuu marar badan beeniyay inuu Ruushku gacan ka helay doorashadii uu ugu tartamayey Madaxtinnimada dalka Maraykanka, sida ay BBC baahisay.